Shakala qaadista, Xamuulka Laashka, silsilad qaadista - Chenli
Chenli wuxuu si adag u aaminsan yahay in horumarku yahay mabda 'buuxda. Waxaan u qaadaneynaa suuq ahaan hagitaan, iyadoo xirfaduhu ay sare uqaadeyso faa iidada tartanka, halka faa iidada xirfadeed inta badan qaabka tooska ah ay tahay mid balaaran oo heer sare ah.Akhri wax dheeraad ah
Dadaalkayaga iskaashi ayaa naga dhigaya ka weyn. Chenli wuxuu ku hawlan yahay dad badan oo karti badan oo xirfad u leh cilmi baarista, maaraynta iyo suuqa. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xaquuqda lama huraanka u ah inuu kiciyo awooddiisa. Kuwaas oo hubiya in shirkaddu ay baarto hal ama laba shey oo cusub sanad walba.Akhri wax dheeraad ah
Chenli wuxuu helay ISO9001, CE, GS, CCS, shahaadooyin, oo aan ku badnayn isla warshadaha. Dhanka kale ceymiskayaga PICC wuxuu awoodi karaa RMB2000000 caymis masuuliyadeed sanad walba.Akhri wax dheeraad ah
Kooxda Chenli waxay leedahay teknolojiyad wax soo saar tayo sare leh iyo koox maamul, Nidaamka maaraynta guryaha casriga ah iyo habka waxqabadka habka xakamaynta tayada tiknoolajiyada wax soo saarka, asal ahaan waa la dhameystiray isbeddelka ka imanaya maamulka xakamaynta ee ka hortagga.
Meheradda ayaa maareysa caqiido
Ammaan Badan Rigging Chenli Lagu kalsoonaan Karo
Falsafada adeegga ganacsiga
Macaamiisha waa sax weligood
Ku adkeyso hagaajinta, warshadaha khayaanada gaarka ah faa'iidooyinka maaraynta horumarsan, faa'iidada tikniyoolajiyadda, faa'iidada astaanta, had iyo jeer la kulmo shuruudaha kastamka.
Hogaamiyaha khayaanada hal-abuurnimada maaraynta warshadaha iyo hal-abuurnimada farsamada. Kooxda Chenli waxay diyaar u tahay inay had iyo jeer ku garab istaagto, waxay ka dhigi doontaa macaamiisha sumadda Chenli inay waligood hanti yeeshaan.
Super-low Head Room Silsilad silsilad koronto
HSZ-D silsilad silsilad
MAKIINADDA SAXAFADA XIRIIRKA CLH1000
dalalka iyo gobollada
Shirkado siyaado ah oo wanaagsan
Diyaargarow taxaddar leh, Dhalista aan xadidneyn, Amnigu Waa King
Miisaanka Weyn Faa'iidada
Shakaalka iyo rakibidda
Shandada qaadista Chenli hadda waxay noqotay shirkad horseed ka ah Shiinaha. Waxaanan abuuraynaa aqoon-isweydaarsigii ugu ballaadhnaa. Chenli wuxuu leeyahay khadadka waxsoosaarka oo dhameystiran laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabada la dhameeyay. Farsamaynta kasta waxay leedahay aqoon-isweydaarsi madax-bannaan, samaynta shakaalka wax lagu qaado, suunka dhejiska, suunka jiidaya baabuurta laga bilaabo 0.5T illaa 3000T. Waxaan awood u leenahay inaan si dhakhso leh u dhameystirno amarka weyn.
Chenli hadda wuxuu leeyahay gabi ahaanba qalab tijaabo ah oo qumman, kaas oo hubinaya inaan dammaanad ka qaadi karno tayada wadhaf wareega ah, laga bilaabo 20T ilaa 3000000, iyo shabaqleyda websaydhada, laga bilaabo 20T illaa 50T.
Iyaga oo wajahaya dhibaato dhaqaale, macaamil kasta wuxuu ku daba jiraa macaashka ugu badan. Tirada dalabkeennu waxay kor u qaaddaa 40% marka la barbardhigo sanadkii hore. Rumayso awooda lammaanaha, aamin Chenli.
Qaadista haysa waa nooc ka mid ah qalab aad u sahlan, waxay ka dhigi kartaa shaqadaada mid fudud in la sameeyo.Chenli wiishka haynta ayaa ka hooseysa warshadda chenli lifaaqa oo ah warshaddii ugu horreysay. waxay leeyihiin duruuf iyo nabadgelyo ka wanaagsan. Chenli wiish clamps waxay ku guuleysataa sumcad wanaagsan Pearl River Delta, Yangzi River Delta Delta, Woqooyi-bari waxay sabab u tahay sicirka waxqabadka sare. Waxyaabaha: nalalka kor u qaadaya nooca SVC, trolleys, pulleys.Waxaan bixinay adeegga OEM ee Japan, Finland iwm.
Chenli had iyo jeer wuxuu raadraacayaa badbaadada iyo tayada wax soo saarka, wuxuuna xasuusinayaa dadka isticmaala nidaamka isticmaalka inay fiiro gaar ah u yeeshaan nabadgelyada.
Silsilado xoog badan oo Chenli ah, waxaan soo saari karnaa silsilad alxan ah, qaadista (hoisiting) silsilad, silsiladda miinada, silsiladda xoolaha, silsiladda magdhawga wiishka, silsiladda taayirada iyo silsiladda dahaarka leh ee caagga ah iwm ku dhowaad 300 nooc, oo si ballaaran loogu adeegsaday ujeedo kala duwan sida qaadista, kor u qaadista , jiidista, xirxirida, miinada, beerta iwm.
Chenli waxay soo saartaa noocyo silsilado ah, kuwaas oo ka sameysan bir bir ah oo kaarboon-yar ku jirta. Waxay leeyihiin astaamaha haddii ka-hortagga saameynta, awoodda wax-qabad ee sarreeya, ductility, dheereynta.
Chenli G80chain wuxuu la kulmaa DIN5687, DIN5688, heerka Jarmalka, ISO3076. Waxaan ku shaqeyn karnaa dusha sare iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Ma dooneyno cabirka weyn. Kama daba geleyno tirada amarada, daacadnimada, taxaddar taxaddar leh, hal-abuurnimo, saxnaan, saami aad u sarreeya oo shaqeynaya iyo qiime, gaaritaanka sumcaddeena suuq wanaagsan. Waxaan sii wadi doonnaa tijaabinta alaabada tayada sare leh, waxaan isku dayeynaa inaan noqono kuwa takhasus gaar ah leh, waxaanna gacmaha isqabsan doonaa macmiisha ku socota jihada isku mid ah, gaaritaanka guul weyn
Qalabaynta iyo qaadista qalab dhammaystiran
Qalabka farsamada ayaa ka hooseeya warshadda cusub ee Chenli, Waxay ku taal bartamaha bir been abuur ah, gobolka hebei. Waxaan la shaqeynay injineer khibrad u leh tobanaan sano oo ah lataliye xagga farsamada ah. Tallaabo Tallaabo waxaan soo saareynaa qalab farsamo. Laga soo bilaabo sawir kasta illaa rinjiga waxaan ula dhaqmaynaa tallaabo kasta oo adag. Shayga waa ka wax ku ool ah oo uu leeyahay mote qiimaha tartan rasmi ah, kaas oo keena in badan oo amar. Isla sannadkaas waxaan soo saarnaa oo iibinnaa 87 nooc oo mashiinka xadhigga xargaha ah. Qalabka farsamada Chenli waxaa loo isticmaalay waax kala duwan waxaana loo dhoofiyey Malaysia, Singapore, Iran, India iwm.
Ruxitaanka iyo qaadista ...